Nepal Auto | स्वचालित कार : यस्ता छन् फाइदैफाइदा
स्वचालित कार : यस्ता छन् फाइदैफाइदा 20 Ashwin, 2075
आजकाल स्वचालित कारको चर्चा निक्कै सुनिन्छ । यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ला कि नसक्ला ? शुरुआती परीक्षणका क्रममा केही कार दुर्घटनामा परेपछि यस्ता संशयले झनै बल पाएको थियो । यद्यपि यो विषयमा थप अनुसन्धान भईरहेको छ ।
यससँगै स्वचालित कारका पछिल्ला संस्करण तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित बन्दै गएका पनि छन् । कुनै मिहनेतबिना आरामदायी यात्राका लागि यी कार निकै उपयोगी हुने ठानिएको छ । टेष्ट ड्राइभिङ भएपनि अहिलेसम्म स्वचालित कार पूर्ण रूपमा सडकमा गुडाउन भने थालिएको छैन । स्वचालित कार कस्ता होलान् ? यसलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिएला ?
स्वचालित सवारीलाई प्रोग्रामिङ गर्न सकिने गरी विकास गरिएको हुन्छ । कमाण्ड दिएपछि यसले रोबोटले झैं काम गर्ने क्षमता राख्छ । यसले गर्दा सामान लिन जाने तथा पु¥याउने कार्यमा आफै जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ । यस्तै, बालबच्चालाई विद्यालयबाट घर ल्याउन विद्यालयसम्म अभिभावक पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन । समय र स्थान तोकेर ‘कमाण्ड’ दिएपछि कार आफै त्यहाँ पुगेर अ¥हाएको काम फत्ते गर्छ । यसका प्रयोगकर्तालाई इन्धनका लागि लाममा बस्नुपर्ने झन्झटसमेत रहन्न । साथै, कार पार्क गरिरहेको अवस्थामा ताररहित प्रविधिको सहायताले आफै चार्ज हुन्छ ।
पार्किङ समस्याबाट मुक्ति
स्वचालित कारका प्रयोगकर्तालाई पार्किङको समस्याबाट समेत मुक्ति मिल्ने छ । किनभने, यी कारमा जडित प्रविधिले प्रयोगकर्तालाई तिनको निर्धारित गन्तव्यमा पु¥याएपछि स्वचालित रूपमा उपयुक्त पार्किङ स्थानको छनोट गर्न सक्छ । उपयुक्त स्थान खोजी र आफै पार्क गर्ने क्षमता स्वचालित कारमा हुने भएकाले सजिलो हुनेछ । त्यहाँ पर्याप्त पार्किङ स्थान नभएमा नजीकै रहेको अन्य पार्किङका बारेमा समेत यसले जानकारी बटुलेर पार्किङका लागि स्वचालित रूपमा त्यहाँ पुग्न सक्छ । साथै, प्रयोगकर्ताले फर्किने समयमा आवश्यकताअनुसार कारलाई बोलाएर फर्किन पनि सक्छन् । अहिलेका कारका तुलनामा पार्किङमा धेरै कारसमेत अटाउन सकिन्छ । चालकका तुलनामा स्वचालित कारले अझ कम स्पेसमा कार पार्किङ गर्ने क्षमता राख्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोगी
स्वचालित कारको संख्या बढ्दै जाँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै सहजता पैदा हुनेछ । विद्युतीय सवारी भएकाले यसले प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि प्रत्यक्ष योगदान दिनेछ । यसले गर्दा शहरका बाटामा पैदल यात्रा गर्नु थप सहज र सुरक्षित हुनेछ । यसको लाभ स्वतः सडकमा हिंड्ने पैदल यात्रुदेखि चालकसम्मलाई पुग्नेछ । पैदल यात्रालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने निश्चित छ । स्वच्छ वातावरणमा पैदल यात्रा गर्दा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देख्न सकिनेछ । यसले देशकै स्वास्थ्यका लागि हुने खर्चमा कटौती ल्याएर समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । साथै, मन लागुन्जेल हिँड्न सकिने र थाकेपछि कारलाई आफू भएकै स्थानमा बोलाउने सुविधा समेत हुनेछ । यसले मानिसलाई निर्धक्क भई मन लागेको स्थानमा पैदल यात्रा गर्न प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
यात्रा गरिरहेकै समयमा काम गर्ने, किताब पढ्नेलगायत काम स्वचालित कारमा गर्न सकिन्छ । यसो भएपछि यात्राको समय पनि मज्जाले उपयोग हुनेछ । यसले गर्दा यात्राको समय लम्बिँदा समेत मानिस चिन्तामुक्त भएर आफ्नो काम गर्न सक्छन् । साथै, यो शौख र थप प्राथमिकताको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न । लामो समयसम्म कारमै बिताउनु पर्दा पनि कामलाई निरन्तरता दिन सकिने भएकाले स्वचालित कारको उपयोगितामा थप व्यापकता आउने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्यथा नभएमा स्वचालित कारले मानिसको उत्पादकत्वमा समेत भारी वृद्धि ल्याउने आँकलन गरिएको छ ।
स्वचालित कारमा यात्रा गर्दा कार नियन्त्रणका लागि चिन्ता लिइरहनु पर्दैन । त्यसैले, आफ्नो समग्र ध्यान सडकमा केन्द्रित गर्दा हुने थकानबाट मानिसले छूटकारा पाउन सक्छन् । तर, लामो समयसम्म यसरी यात्रा गर्दा र अफरोड आँखा डुलाइरहँदा मोशन सिकनेश अर्थात् गति सम्बन्धी रोगबाट मानिस ग्रस्त हुने सम्भावना रहेको भन्दै सचेत हुन विज्ञहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । यसको विकल्पका रूपमा यात्राका क्रममा सुत्ने बानी अपनाउन सकिन्छ । यसले मोशन सिकनेशबाट जोगाउनुका साथै थकान हुँदा आराम र नपुगेको निद्रा पूरा गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वचालित कारले मानिसलाई आरामको अवसर प्रदान गर्दै सधैं फुर्तिलो रहन सहयोग गर्छ । फुर्तिलो रहँदा थकानको समयको तुलनामा उत्पादकत्वसमेत बढ्छ ।
मानवीय जीवनशैलीमा आमूल बदलाव दिन सक्ने स्वचालित सवारी साधनका यस्ता अनगिन्ती लाभको अपेक्षा पक्कै गरिएको छ । तर यी अपेक्षा पूरा हुने गरी क्रियान्वयनमा स्वचालित कार सडकमा आउला ? असम्भव छैन ।
यामाहाले ल्यायो नयाँ वर्ष ग्राहक योजना ‘विस काउन्ट’, ५० हजारसम्म छुट
नौबिसे-मुग्लिनका ३१ जोखिमयुक्त स्थान
सरकारको एक उच्चस्तरीय समितिले बांगेमोडसहित नौबिसेदेखि मुग्लिनसम्मको ८३ दशमल...
टायर सिलेन्टका वारेमा थप जानकारी
टायर उपभोक्तालाई थप सुविधा र थप सुरक्षाका लागि टायर सिलेन्ट प्रयोगमा ल्याइएको हो...